Iindaba - ISNOPE ibambe intlanganiso yonyaka ukubhiyozela UNYAKA OMTSHA ngomhla wama-29, eJAN.
Kuza kwiholide YONYAKA OMTSHA, uSNOPE ubambe indibano yonyaka ukuyibhiyozela kunye nabo bonke abasebenzi. Umphathi jikelele wenze isishwankathelo sentsebenzo yonyaka ophelileyo kwaye wabancoma abasebenzi ababengezelelweyo. Amabhaso awahlukeneyo athiwa thaca “njengebhaso lomqeshwa elisemagqabini” “Elona bhaso libalaseleyo” “elona bhaso lithengiswayo”… Umphathi jikelele ucacisile kwicala lomsebenzi ngo-2021. Ukomeleza uqeqesho lwabasebenzi, ukwandisa imizamo emitsha yophuhliso lwemveliso, ngakumbi iiprojekthi eziphambili zabathengi ukubonelela ngenkxaso imigaqo-nkqubo.
Umtsalane onethamsanqa wenza ukuba lonke iqela livuthwe. Ikwayara "ngomso iya kuba ngcono" izisa isiqalo esihle, ivakalise iminqweno emihle yabasebenzi beSNOPE ngekamva lenkampani. UNkosazana Feng Chen, umlawuli wenkampani, wayenxile kukuma kwakhe okumnandi; UMnu Yu Zhou, umphathi jikelele, wasikhuthaza ukuba sikhumbule iminyaka enzima eyadlulayo; ingoma yomlingo "iapile encinci" eyenziwa ngabafazi basekhaya benkampani yayithandwa kakhulu; Imidlalo yokunxibelelana phakathi kwabasebenzi ibidlamkile ngexesha lenkqubo; Imisebenzi emine yethamsanqa kunye namabhaso ali-19 atyhalele umoya wentlanganiso yonyaka kwincopho, kwaye elona bhaso liphezulu le-iPhone 12 ekugqibeleni lawela ezandleni zomphathi wentengiso uYang Zheng. Kwisidlo sangokuhlwa sonyaka omtsha, bonke abasebenzi baphakamise iiglasi zabo ukubhiyozela unyaka omtsha kwaye banethemba lokuba ikamva leSNOPE liza kuba ngcono.
Intlanganiso iphela yonyaka yafikelela kwisiphelo esiphumelelayo kwimeko yemvisiswano, efudumeleyo, enomdla kunye neyonwabisayo, ebonisa amandla, amandla, umanyano kunye nomoya oqinisekileyo wabasebenzi. Xa sijonga emva kwi-2020, senza iinzame ezidibeneyo, sisebenza nzima, kwaye sizuza kunye; sijonge phambili ku-2021, sinenjongo enye, sigcwele ukuzithemba, kwaye ngokudibeneyo silindele ukuba ikamva leSNOPE liza kuba liqaqambe ngakumbi.